शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०६ : ३७
यतिमा लुटपुटिएको सरकार
गणतन्त्रको घोषणासँगै राष्ट्रको नाममा आएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाह परिवारको सम्पत्तिमाथि निजी कम्पनी यति होल्डिङ्सको कब्जाले शक्तिशाली दल र निजी कम्पनीको स्वार्थ मिल्यो भने कुन हदसम्मको बदमासी हुन्छ भन्ने प्रस्ट बनायो।
यथास्थितिमा रहनु प्रतिगमनको बाटो समाउनु हो। यसबाट जीवन परिवर्तन हुँदैन। एक प्रतिशत सम्भावना पनि छैन। जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन प्रगतिको बाटो हिँड्नु पर्छ। यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। कुनै पनि किसिमको बहानाबाजीका लागि स्थान छैन।
देशको विकास ढिला होस् तर...
हिजोको एकल जातीय राज्य आज इतिहासको किताबमा सीमित भइसकेको छ। आजको नेपाल पाउनुमा यहांका हरेक जाति, भाषीधारी, क्षेत्र, लिङ्ग, गोत्र सबैको बराबर भूमिका रह्यो।
तानाशाहले रोपेको विष
तानाशाह आफू शक्तिमा हुन्छ अरुलाई झुण्ड्याउँछ, जब ऊ शक्तिहीन हुन्छ आफैँ झुण्डिन्छ। पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफको हकमा पनि यही भयो।
मानसिक चिन्ताको मनोपरामर्श
डिप्रेसन (मानसिक चिन्ता) आधुनिक विश्वको प्रमुख समस्या हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार संसारभरि ३० करोड सर्वसाधारण मानसिक चिन्ताबाट ग्रसित छन्। अशक्तताको प्रमुख कारणमध्ये मानसिक चिन्ता एउटा हो। मानसिक चिन्ताको समयमै पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। मानसिक चिन्ताको प्रकार पहिल्याएर उचित उपचार दिनुपर्ने हुन्छ।
रेस्ट इन् पिस, नैतिकता र विवेक !
जब नैतिकता र विवेकबारे लेख्न बसेको थिएँ, तपाईंलाई जस्तै मलाई पनि विषय अलि वृहद् भयो भन्ने नलागेको होइन। तेरो के हैसियत यस्ता कुरा लेख्ने पनि भन्नु होला, म तपाईसँग सहमत छु।
स्कुल छिर्नै लाग्दा ट्रकले सहपाठी किचेको आक्रोशमा सडकमा उत्रिएका कलिला बालबालिकालाई सम्झाई बुझाई गर्नुको साटो प्रहरीले निर्मम दमन गरेको दृश्यले कटक्क खाएको मन दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको समापनको क्रममा दशरथ रंगशालामा प्रहरीले देखाएको चर्तिकलाले बल्झायो।
किन बोल्दैछन् महिला ?
स्त्री बनाइएकी पहिलो महिला को थिई होली ? उसका बारेमा हामी जान्दैनौँ। तर हामीलाई चिन्ता छ र जायज पनि छ कि अन्तिम स्त्री को होली, जसलाई बनाइनेछ। किनभने त्यो अन्तिम स्त्रीपछि स्त्रीहरु बनाइँदैनन्, मात्र उनीहरु स्त्री रहन्छन्।
जीवन परिवर्तनको साइकल
परिवर्तनले नयाँ जीवनको ढोका खोल्ने काम गर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परिवर्तन नै अर्थपूर्ण जीवनको सुनिश्चितता हो।
सिंहदरबार हराएको सूचना
अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने आशा गर्ने स्थानीयहरुलाई के थाहा सिंहदरबारकै जस्तो अकमण्र्यता बोकेर गाउँमा सिंहदरबार छिर्ला भनेर ! यतिबेला स्थानीय तहलाई न त आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको पूर्ण ज्ञान छ न त ती ज्ञानलाई पनि पूर्ण क्षमताका साथ उपयोग गर्ने ल्याकत ! यस्तोमा स्थानीय बासिन्दा पिल्सिएका छन् र भन्न विवश छन्, कहाँ छ सिंहदरबार !
अस्वीकृत नहुने सायदै होलान्। अस्वीकृति सामना गर्नुको कुनै विकल्प छैन। अस्वीकृति सही तारिकाले सामना गर्दा केसम्म सम्भव छ भन्ने बुझ्न केही प्रख्यात प्रसंगबारे चर्चा गरौँ।
हल्ला चलेको वर्ष दिनपछि मन्त्री परिषद् पुनर्गठन भयो। केही मन्त्रीहरु बाहिरिए, कोही भित्रिए तर बाहिरिएकाहरु किन बाहिरिए अनि भित्रिएकाहरु केका आधारमा भित्रिए, आम नागरिकले चालै पाएनन्। आम नागरिकले बुझेको यत्ति हो, ‘पुनर्गठन गर्छु भन्थे, गरे।’
आदर्श प्रेमिकाको खोजी
अधिकांश पुरुषले एक आदर्श प्रेमिकाको सपना देखेको हुन्छ। आफ्नी प्रेमिका विशेष होस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ। यति मात्र होइन, प्रेमिकामा हुनुपर्ने निश्चित विशेषता पनि सूचीकृत गरेको हुन्छ। सोही विशेषताले भरिपूर्ण महिलाको निरन्तर खोजीमा हुन्छ ऊ।
ब्युँतिएको मुर्छित मानवता
मर्नेहरुको ज्यान त जान्छ, घरले एउटा अभिभावक गुमाउँछ तर यस्ता घटनामा सबैभन्दा बढी मानवता मुर्छित हुन्छ। त्यही मानवतालाई ज्यूँदै राख्न संवेदनशील सरकारले घटनामाथि निष्पक्ष छानविन गर्छन् र दोषीमाथि कार्बाही अघि बढाउँछन्।
सम्बन्धको रातो झण्डा
सालो–भिनाजु गुड फ्राइडे मुडमा थियौँ। रात्रिकालीन जीवनको मजा लिन एउटा क्लबलाई गन्तव्य बनाएका थियौँ। बेलुकीको समय, बुलेट बाइकमा हुइँकिदै गर्दा एउटी महिला हस्याङफस्याङ गर्दै पुरुषलाई पछ्याउँदै गरेको देख्यौँ। हामीलाई देख्ना साथ ती महिलाले रुँदै बिन्ती बिसाइन्, ‘दाइ, त्यो केटाले मलाई छोयो। त्यसलाई समात्नुस् न।’
घटना कोरियाको, पाठ नेपालको
राजनीतिले जनतालाई उचालेर कसरी चुनावमार्फत् सत्तारोहणको बाटो सुनिश्चित गर्छन् भन्ने उदाहरण यस पटक दक्षिण कोरियामा मज्जैले देखिएको छ।
आत्मविश्वास र सफलता–असफलता एकअर्काको परिपूरक हुन्। उच्च आत्मविश्वासले सफलताको जग तय गर्छ भने न्यूनतम आत्मविश्वासले असफलताको। कुनै पनि क्षेत्रमा संलग्न हुनुअघि आत्मविश्वास अधिक हुनु जरुरी छ। चाहे त्यो नयाँ प्रेम सम्बन्ध सुरु गर्दा होस् या व्यवसाय। पहिलो डेटिङमा जाँदा होस् या शारीरिक निकटता बढाउँदा।
प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रावधान भए पनि संविधानमा सरकारले चाहेको खण्डनमा उनीहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले सरकारको निर्णय संविधान प्रतिकूल छैन तर जसरी बिना कुनै कारण एकै पटक सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख हटाउने र उनीहरुको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ, त्यसले सरकारको नियत सफा देखाउँदैन।